Jilicsan Flow Fabric Naasaha - Shiinaha Qingdao Aedis Fabric Naasaha
Diffusers hawada MICROFLOW lagu sameeyo difaan permeable danbeeyay si heer oo cayiman ee porosity. Malaayiin dayuuradaha hawada yar ka baxdo iyada oo dhar diffuser ah.
Sida caadiga ah, diffusers MICROFLOW waxaa loo isticmaalaa in Leexin halkii ay isku daraan hawada. Si aad u dhammayn barakac hawada dayuuradaha hawada waa in si dhakhso ah waasac dambidhaafkiisu. Halkee jet POWERFLOW hawada a qaadan kartaa 20 ama ka badan oo si buuxda u waasac dambidhaafkiisu, ee dayuuradaha hawada MICROFLOW yar waasac dambidhaafkiisu gudahood 6 "dusha diffuser ah.
Sababtoo ah xawaare ka mid ah dayuuradaha hawada u yar si dhakhso ah loogu talla galay, hawada guud ahaan waxay noqonaysaa inay soo dagno sida mass iyo Leexin hawada ee heerarka hoose ee qolka.
Diffusers hawada MICROFLOW waxaa ugu horayn loo isticmaalo saddex codsiyada gaar ah. Tan iyo markii ay Leexin halkii ay isku daraan hawada, waxay yihiin kuwo aad u hufan ee ay ka saareen hawada wasakhaysan. Marka labaad, diffusers MICROFLOW sidoo kale uma shaqayn karo sidii filter a meelaha xasaasiga ah, sida cuntada-, laakiin markaas u baahan doonaa noqnoqda la dhaqay. In aad ugu dhow, meelood oo xasaasi ah, MICROFLOW uu samatabbixin karo hawada qabow oo aan u Istimaalka.
Arrimaha muhiimka ah ee MICROFLOW design diffuser hawada yihiin porosity dhar, cadaadis ma guurto ah, oo dhererkeeduna wuxuu diffuser iyo dhexroor diffuser. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo filter a lala diffusers MICROFLOW si loo yareeyo la dhaqay. Talooyinka Codsiga waxaa ka mid ah; Meel Office, isgaarsiinta, processing Cuntada, Fasalka, qolalka nadiif ah, iyo shaybaarada baaritaanka.
Cable daa Rail HALO Cayrin HD Rail
Fasalka Rooms Nadiifi Processing Cuntada Space Office
Air Jet Dillaaca Condensate daadi soo jiita xadhkaha Fabric marinka rakiban Gudaha End Cap Logos Jiinyeer iyo Velcro Connections
Polyester waa dhar ah Qaxwo fasalka premium. Waxay leedahay heerkulka dhalaalisa 350 ° F ah oo lagu mayro karaa qaybaha yar. Polyester waa retardant dab iyo kulmay ASTM E-84 Class A.
a) Cable: cable Xiisadda waa ikhtiyaarka ugu dhaqaalo badan. Diyaar u ah dhammaan dhexroor, kor u cable Single 30 "dhexroor iyo laab ilaa iyo 48" dhexroor iyo xaafuun oo ka sarreeya. Snaphooks waxaa kullan on 36 xarumood "oo laga heli karo caag, bir. Cable waxaa laga heli karaa galvanized, ahama, iyo vinylalkohol dahaarka leh. Nidaamka wuxuu ka kooban yahay cable ah (3/16 "dhexroor), turnbuckle, eyebolts iyo clamps cable.
b) Hakinta HALO: nidaamka ganaax Xiisadda New HALO (HTS) siinayaa muuqaalka kore ee aad nidaamka diffuser FlowCon in la badbadiyay marka nidaamka maaraynta hawada off waa. Doorashadan waxa loo isticmaali karaa si fudud mid isku xigta ganaax cable ama hal rail HD in ay sii diffuser FlowCon raadiso badbadiyay aan hawada ku. 10 "36" dhexroor ku koobnayn, doorashooyinkan waa kaamil ah codsiyada meesha diffuser jaban gacanta dejiyeyna waa dhibaato. Qaybaha si fudud loo qaadi karaa oo aan lahayn shaqada oo dheeraad ah ku maydhay. Qaybaha ka mid Heerka cable xiisad mid isku xigta ama nidaamka tareenka hal our HD.
c) Rail HD: rail New aluminium anodized HD waa nidaamka tareenka premium our. Eegno siman cayishay for our nidaamka FlowCon diffuser dhar. Diyaar u ah dhammaan dhexroor, Single tareenka ilaa 30 "dhexroor iyo laab ilaa iyo 48" dhexroor iyo xaafuun oo ka sarreeya. Gliders waxaa kullan on 36 xarumood "oo laga heli karo caag ah. Nidaamka wuxuu ka kooban yahay tareenka HD, taageero rail, couplers, iyo taageerooyinka toosan (links xawaaraha). Qallooca gacan diyaar u yihiin inay la kulmaan gacan xusulka.
d) Rail daa, daa rail aluminium anodized loo isticmaali karaa codsiyada in FlowCon nidaamka diffuser ay tahay in la saqafka u dhow. Rail radi leeyahay in lagu lifaaqo saqafka guri ama nidaamka T-Bar. Radi Buur tareenka waxaa loogu talagalay si ay u taageeraan 'D' diffusers Naasaha our. D diffusers koollo waxaa loo isticmaalaa marka height saqafka waa dareen ku. Waxaa loo baahan yahay nidaamka tareenka daa A double si ay u taageeraan 'D' diffuser duct. Cabirada ka 6 "18" gacan (12 "36" ballaadhan) ayaa laga heli karaa. Nidaamka wuxuu ka kooban yahay buurta rail daa, iyo dhamaadka gabal. Qallooca gacan ayaa la heli karaa.
Previous: Micro Flow Fabric Naasaha
Next: Power Flow Fabric Naasaha
Fabric jilicsan Naasaha
OEM Design jilicsan Naasaha
jilicsan Air Naasaha
jilicsan Air Ducting